Best Hi-Fi Turntables 2017 - Asịwo ji ndu - China 10TURNTABLES
> Best Hi-Fi Turntables 2017 - Asịwo ji ndu
Hi Fi Turntables nkọwapụta Comparison
Brand Name n'efere dị mbadamba mbanye usoro gbapụrụ ọsọ katrij mkpọchi
Audio- Technica AT-LP120-USB Silver aluminum eriri mbanye 2 ọsọ AT95E Check Price
Teac LP-R550USB Turntable plastic eriri mbanye 3speed TEAC STL103X2 Check Price
Numark TTUSB	 Aluninum eriri mbanye 2 ọsọ Audio-Technica katrij Check Price
Teac TN-300 analọg Turntable (Black) Aluminum Die-ikpe eriri mbanye 2 ọsọ MM Ụdị (audio-technica AT95E Check Price
Fluance RT80 High Ịghara Ịgba n'Èzí Vinyl Turntable Record Player Aluninum eriri mbanye 2 ọsọ MM Ụdị (Audio-technica AT95E) Check Price
TEAC LP-P1000 Turntable plastic eriri mbanye 3speed TEAC STL103X2 Check Price
Pro-Ject - mpụta mbụ Carbon DC (Black) aluminum eriri mbanye 2 ọsọ Ortofon OM5E katrij tupu n'ịnyịnya Check Price
Rega - RP1 Turntable (White) New n'elu mmiri iko 'Optiwhite' polished rim 12mm eriri mbanye 2 ọsọ Rega Carbon Check Price
Music Hall MMF 2.2LE Limited Edition Audiophile Turntable music ulo spirit na-akpali akpali-magnet katrij na nnọchi eriri mbanye 2 ọsọ MMF 2.2 Check Price
Na-Turn Audio - agba Plus Turntable (acha anụnụ anụnụ) acryli eriri mbanye 2 ọsọ Ortofon OM5E na elliptical diamond mkpịsị Check Price
Channel Nkewa: > 20 dB na 1 kHz
Ndepụta Force iche: 1.5-2.5 grams 2.0 grams (20 igwe) na-atụ aro nsuso ike
Na-atụ aro Ibu Ibu Impedance: 47,000 ohms mmepụta 3.5 MV (1 kHz, 5 cm / sec)
Channel Balance: n'ime 2.0 dB
Mkpịsị Type: 0.4 x 0,7 nnù elliptical diamond mkpịsị
Ugwu: Ọkara-anụ ọhịa
Iji malite ihe anya, Audio-Technica bụ ihe ike ika si Japan na pụtara na audio ụlọ ọrụ ruo ọtụtụ afọ na ọ bụ na ngwaahịa ndị oké ọnụ, eweta ọṅụ na ịja mma. Mgbe ọ na-abịa ukporo n'ige ntị, ị gaghị na-ezighị ezi na impeccable Audio-Technica AT-LP120-USB. Nlereanya a bụ kpọmkwem-drive professionalturntable nwere ihe ikpoputa ụda nke na-eme ya dị ịtụnanya maka ndị dị otú ahụ na ihe oké ọnụ price.
Maka $ 289, ị ga-echefu na a hassle free turntable dị ka ọ nwere a switchable wuru na-preamplifier na akara-larịị RCA mmepụta Gịnị; pụtara na ị ga-akpa ọ bụla mmezi ngwa jikọọ gị turntable ka a stereo. The akụkụ kasị mma banyere nke a turntable bụ na o nwere a USB n'ọdụ ụgbọ mmiri na-enye gị ohere jikọọ gị MAC ma ọ bụ Windows kọmputa na digitize ọkacha mmasị gị ndia. Ngwaahịa a na-abịa na a Mac / PC dakọtara audacity software na a USB cable. Ọ na-abịa na a replaceble katrij na isi-shei.
Nlereanya a nwere 3 dị iche iche gbapụrụ ọsọ; 33-1 / 3, 45 na 78RPM. Ya mere, ị ga-enwe ike igwu egwu ma na-enwe ihe ọ bụla ndekọ gị collection The ọsọ n'ihi na nke a nlereanya bụ Ichi na-agbanwe agbanwe. Ọ bụrụ na nke ahụ bụ ezughị ise gị anya, nke a nlereanya na-enye gị ka ịhazie pitch site na 10% ma ọ bụ 20% na ọ nwere nnukwu-ziri ezi quartz-achịkwa pitch mkpọchi. Ọ nwere ihe S ekara ụda ogwe aka-ezukọta na kemeghi counterweight, mgbochi skate ukpụhọde na-ụda-ogwe aka elu ukpụhọde na mkpọchi. Enweghị nwere na-aga site a mgbagwoju anya set-elu usoro, nke a nlereanya-enye ahịa ihe oké ọnụ ụzọ na-ege ntị ha mmasị ndia na ya elu torque moto.
Ya kpọmkwem-drive moto anapụta ngwa mmalite-acha ọkụ.
33-1 / 3, 45 na 78 RPM ege gbapụrụ ọsọ ekwe ka ị na-enwe gị dum ndekọ collection.
The obi ute yiri ka wetara a otutu static ka elu nke vinyl.
CD edekọ Nkebi USB Nkebi Turntable Nkebi Mezie Nkebi General
CD-R / RW ndekọ si Phono, Mezie, tuner, aux
Igbe-ụdị CD edekọ
Rec Ọkwa Control maka analogue Source ndekọ
Megharịa (1 / ALL), ịkpọgharịa, 32-track Program Play
USB Audio Ọ si Phono, CD, Mezie, tuner, aux na PC
MP3 / WMA / PCM * ndekọ on PC / Mac
3-ọsọ Turntable (33-1 / 3, 45, 78rpm)
Kaseti Mezie Player
High / Nkịtị Mezie Positions
Play, ịkwụsịtụ, FWD, REW Operation
PLL synthesized AM / FM baraaka tuner
Bass-mpiaji ụdị okwu
Ọkà okwu: 2 "-3/4 Full iche cone x 2
3.5 W + 3.5 W ampilifaya mmepụta Ike
Audio mmepụta: x 1 (RCA)
Headphone: x 1 (baraaka Mini)
Ọrụ: 120V AC, 60Hz
Arọ: 24,3 lbs. (11.0 n'arọ))
Ọ bụrụ na ị na-achọ a turntable na-enye ohere mfe ndekọ nke ndekọ, cassettes, na redio, lee dịghị ihe ọzọ dị ka nke a bụ ihe nlereanya ka i. Ọ bụghị naanị na ọ na-ekwe ka ị na idekọ, ọ na-nwere ihe inyeaka ọdịyo ọsọ ọsọ na CD-R / RW. Ọ na-ede LPs, CD, na redio na cassettes na PC na mfe ụdị via a USB njikọ. Ọ bụ 3.5W + 3.5W amplifiers na bass-mpiaji ụdị stereo ọkà okwu na-iji ike a pụrụ iche ụda nke ahụ bụ obi gị ntị.
Tọrọ ntọala na Japan, TEAC e n'ichepụta audio ngwaahịa ihe karịrị afọ 63. N'ihi ya, i nwere ike nzọ ha na ngwaahịa na-pụrụ ịtụkwasị obi. N'ihi na price nke $ 276, ị ga-echefu na a 3-ọsọ analọg turntable na akpaaka-laghachi mma. Gị mma, ọ na-nwere ihe RCA pin Jack input / mmepụta jikọọ ọ bụla ẹdude audio player akụrụngwa. Isi n'ire isi nke nlereanya a bụ CD burner na cassette oche.
Na na-ekwu, ọ na aesthetics bụ nnukwu na a nta aka nke a nke oge a na ochie obi na-adị. Suiting mmasị gị, ị na-ekwe ka nwere ma ntuziaka ma ọ bụ akpaka mwube nke track nọmba mgbe Ndekọ a CD. A ime akara na-abịa na nke a unit nakwa ịchịkwa ọrụ na a anya si unit. Nke a bụ zuru okè nlereanya gburugburu.
Bright na mfe iji na-agụ LCD Display.
Ọ raara onwe ya nye mkpọchi maka ugboro ugboro ji ọrụ ana achi achi ala nke iji.
Ọ nwere obere bit nke mkpọtụ mgbe ọ bụla a vinyl na-akpọ.
Product arọ (na nkwakọ): 12lbs
Turntable arọ: > 7.7lbs
Master CTN akụkụ: 20,27 "x 17,16" x 6,85 "
Motor: echebe mbanye
Ẹtop: +/- 10%, 33 1/3 RPM ma ọ bụ 45 RPM ọrụ
Ntinye: 1/8 "stereo akara larịị
Ndapụta: RCA (Line / Phono), USB Audio
Sitere Rhode Island nke US, Numark bụ ihe ike ika na-eme ka na-amalite magburu onwe audio teknụzụ maka djs na Egwú gburugburu ụwa n'ihi na nke ikpeazụ 40 afọ. The Numark TTUSB Turntable nwere niile atụmatụ o kwesịrị ịbụ a quality Ntụgharị turntable.
Ọ bụrụ na ị na-eche banyere ya na-agba, a turntable arụ na 33 1/3 na 45 RPM. Ọ nwere ihe kemeghi mgbochi skate akara maka ụba stereo iṅomi. Ọ na-nwere a USB ọdụ ụgbọ mmiri njikọ n'etiti turntable ma ma PC ma ọ bụ Mac. Ọ na-nwere 1/8 "stereo akara ọsọ ọsọ na-RCA akara ndapụta na kemeghi pitch akara + 10%. All mkpa Gịnị na-nyere gị ijikọ turntable gị kọmputa ma ọ bụ stereo playback usoro; niile maka gị mma. Nke a na-eme ka ọ dị mfe iji tọghata niile LPs ka digital formats.
Ya imewe bụ ahụkebe. Ọ nwere a n'ezie oge a anya na otu okwu na-akọwa na ọ bụ "futuristic". Ntekwasa na ọla-ọcha, nke a bụ otu n'ime ihe ndị kasị mara achọ ụdị ị ga-ahụ na ahịa. N'ihi ya na-ekwu, ndị Numark TTUSB turntable bụ uru ọ bụla penny ị na-setịpụrụ na-akwụ ụgwọ $ 133 na-aka gị na.
Ọ nwere a diecast na machined aluminum usan edi n'ihi na mma uka na ndị ọzọ na-agbanwe agbanwe diski ọsọ.
Ọ nwere ihe S ekara ụda na ogwe aka.
Nwere ike akpa ogho kwa ngwa ngwa na-egwu egwu.
04 • Teac TN-300 analọg Turntable (Black)
Turntable ngalaba Tonearm ngalaba katrij ngalaba Phono uda ampilifaya analọg mmepụta USB mmepụta ngalaba Power Power Oriri N'ozuzu Dimensions arọ Ngwa
Ụgbọala System: echebe mbanye
Adiana Speed mgbanwe: +/- 2%
Chaị na Flutter: 0,2%
Signal-to-Noise ruru: 67dB ma ọ bụ elu (A-dara nha, 20kHz LPF), 60dB ma ọ bụ elu (unweighted, 20kHz LPF)
Usan edi: Aluminium Die-nkedo
Dayameta nke usan edi: 12 ", 30cm
Type: Static Balance, Kwụ Ọtọ
Irè Ogwe aka Ogologo: 8.8 ", 223mm
Mkpịsị Pressure iche: 0 5g
Akwado katrij arọ: 3.5 na 6.5g
Anti-iji atụrụ ukpụhọde: akwado
Type: MM ụdị (audio-technica AT95E factory arụnyere)
Mkpịsị Ọdịdị: Elliptical
Mkpịsị Construction: o sie Now shank
Ugwu: Ọkara inch
Frequency Response: 20Hz ka 20kHz
Channel Nkewa: 20dB na 1kHz
Ndepụta Force: 1.5 na 2.5g
Vetikal Ndepụta n'akuku: 20 degrees
Akwado Ibu Ibu Impedance: 47k ohms
Mmepụta voltaji: 3.5mV (1kHz, 5cm / sec.)
Mkpịsị Pressure: 2.0g +/- 0.5g
Katrij arọ: 5.7g +/- 0.5g
Head-shei arọ: 10g (gụnyere kposara, akụ na wires)
Nnọchi mkpịsị: Audio-Technica ATN95E
Ụdị ampilifaya: MM ụdị (On / Thru switchable)
Njikọ: RCA Pin jaak (Gold plated)
Mmepụta voltaji: Phono / Line switchable
Phono mmepụta: 4.5mV +/- 3dB
Line mmepụta: 120mV (-13dBV)
Njikọ: USB B ụdị
Mmepụta Signal: PCM 48kHz / 16-bit
Akwado OS: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, OS X Lion (10.7), OS X Mountain Lion (10.8), OS X Mavericks (10.9), OS X Yosemite (10.10), OS X El Capitan (10.11 ), MacOS Sierra (10.12)
AC 100 na 240V, 50 / 60Hz
1.5W (erughị 0.5W na Njikere)
(W x H x D): 16.5 "x 4.6" x 14,0 ", 420 x 117 x 356 mm
Ruru. 10,8 lbs. 4.9 n'arọ
Rubber mpempe akwụkwọ, EP nkwụnye, Counter arọ, Head-shei (audio-technica AT95E), usan edi, Ájá Cover, Rubber ụkwụ fee Ájá Cover X2, mgbabere uzo X2, RCA Audio USB, AC nkwụnye (GPE053A-120050-Z), nwe si Manual (gụnyere akwụkwọ ikike Card)
Ọzọ ọkaibe nlereanya site Teac, na TN-300 bụ analọg turntable-ewu na-phono tupu-ampilifaya na USB digital mmepụta. Nke a bụ a ntuziaka belt-drive turntable na-akwado 33 ma ọ bụ 45 RPM. Sitere Japan, a ụlọ ọrụ na-enweghị obi abụọ na-arụpụta ọkaibe turntables.
Na ihe oké ọnụ price nke $ 269 maka a turntable, ị pụrụ iji tinye ihe a gị Wishlist. The USB mmepụta-enye gị ohere nyefee music si vinyl ndekọ gị MAC ma ọ bụ PC. Ọ na-nwere a wuru na-ekwentị nhazi ụda nke na-ahapụ gị ịgbanwee n'etiti akara na PHONO. Ọ e mere na a na nwa isi na ya anya ahụkebe. E wezụga nke ahụ, o nwere a aka nke silver gburugburu na-enye ya a classy anya.
E wezụga na-enwe a sleek imewe, nlereanya a na-abịa na Audio-Technica MMVM ụdị ígwè phonograph katrij AT95E. Ọzọ nnukwu mma banyere nke a turntable bụ na o nwere gold plated ọnụ maka ọxịdashọn eguzogide. N'agbanyeghị na ọ na-enwe a obere akwụkwọ ikike, atụmatụ na imewe nke nlereanya a maa-eme ka elu maka ya. Ná mmechi, ma ọ bụrụ na nke a bụ n'ime gị ego, egbula nweta nlereanya a dị ka ọ bụ mma.
The Audio-Technica katrij emepụta a nnọọ mma ụda gburugburu.
The ọsọ pụrụ ịgbanwe na button Oche.
Nlereanya a na-abịa na a obere akwụkwọ ikike.
05 • Fluance RT80 High Ịghara Ịgba n'Èzí Vinyl Turntable Record Player
Kabinet nkọwa TURNTABLE nkọwa TONEARM nkọwa katrij nkọwa roba eriri nkọwa mmepụta nkọwa IKE nkọwapụta General nkọwa
Kabinet IHE: MDF
Imecha: ese High Gloss (Black)
Ájá IKPAEDEM: Ee - ụba
DRIVE usoro: echebe mbanye
Ọsọ: 33 1/3 RPM, 45 RPM
Ha ha NA FLUTTER: 0,2%
Mgbaàmà-TO-mkpọtụ ruru (dara nha): 67dB ma ọ bụ elu (A-dara nha, 20kHz LPF)
Mgbaàmà-TO-mkpọtụ ruru (UNWEIGHTED): 60dB ma ọ bụ elu (unweighted, 20kHz LPF)
Usan edi: Aluminium
TURNTABLE ute: Nnọọ
TONEARM Ụdị: Static Echiche Ziri Ezi, S-Type
Mgbochi iji atụrụ ukpụhọde: Ee
PIVOT agba: Ee
TONEARM IHE: Aluminium
Irè TONEARM uka: 28,2 grams
Irè TONEARM ogologo: 224mm
HEADSHELL Ugwu: H-4 bayoneeti Ugwu
TONEARM elu: 17mm
Katrij Ụdị: na-akpụ akpụ Igwe Ọdụdọ (MM)
CATRIDGE nlereanya: Audio Technica: AT91
Nnọchi mkpịsị: ATN91
Mkpịsị: 0.6mil bonded yiri okoso (Diamond)
Ugboro omume: 20-20,000Hz
Ọwa NKEWA: 18dB na 1kHz
Ọwa itule: 2.5dB ma ọ bụ obere na 1kHz
Ibu IMPEDANCE / CAPACITANCE: 47k Ohms / 100pF
Mmepụta voltaji: 2.5mV +/- 3dB
Katrij arọ: 5.0g (+/- 0.5g)
HEADSHELL arọ: 10g
Na-atụ aro nsochi Force: 2.0g (+/- 0.5g)
Vetikal nsochi n'akuku: 20 degrees
Njikọ: RCA (Gold plated)
PREAMP: Ee, PHONO / EZIOKWU Switchable
PHONO mmepụta: 2.5mV +/- 3dB
EZIOKWU mmepụta: 140mV (-17dBV)
Ala ọnụ: Ee
Ọsọ ọsọ: 100V - 240V AC (50 / 60Hz)
Mmepụta: 12V / 500mA
Akụkụ: 16.5 "x 5.5" x 13,75 "
Certifications: FCC Certified, RoHS, CUL / Mankeumman
Unit arọ: 4.5 n'arọ (9.9 lb)
Ịwa okpomọkụ: 20 ° C
Ihe na-gụnyere: RT80 Turntable, Ájá Cover, 45 nkwụnye, Nnọọ Ileghara ute, 6ft RCA USB na Ground Waya, 100V - 240V (50 / 60Hz) AC Power nkwụnye, Ndenye Malite Guide, ndụ Nkwado Ndị Ahịa, 2 Year emeputa Akwụkwọ ikike
A isi mmalite nke a nlereanya site Fluance; ya abịa na a adịchaghị katrij, diamond mkpịsị, belt mbanye, wuru na-preamp, kemeghi counterweight tinyere mgbochi iji atụrụ na N'ezie a kenkowaputa black osisi kabinet. Ọ na-ejide gị anya? Recreate arụmọrụ na nka bu n'obi, adịchaghị mmiri nke nlereanya a na-enye ohere nke a elu nruwe belt chụpụrụ turntable na-emepụta a dị ọcha analọg na-ege ntị ahụmahụ.
Fluance bụ a ụlọ ọrụ na-na-ike Ontario na ha kwere na a ọma turntable-adịghị ga-enwe oké ọnụ. Chọrọ a katrij na-arụpụta pụtara ìhè n'ụzọ doro anya? Lee ọ gara n'ihu dị ka ihe nlereanya a na-abịa na a elu arụmọrụ AT95E Audio Technica katrij. Ọzọkwa, diamond ellipitical tipped mkpịsị e mere na-soro gị ndekọ grooves na ukwuu nkenke na izi ezi n'ihi na elu definition ọdịyo. Na ezi aluminum S-Type tonearm, zuru okè playback nwere ike nweta na a ana achi achi mkpịsị na-zuru miri emi na gị ndekọ nke uzo. N'ihi ya, na-amị ọ bụla audio zuru ezu indistinguishable si mbụ ndekọ.
The mara mma ukpa okokụre kabinet na-deere si siri ike audio-ọkwa (MDF) osisi na-agụnye iche na ụkwụ, ihe aluminum usan edi, a roba ileghara ute nke utịp ke elu iche si na-achọghị vibrations. Captivating mgbaàmà doo anya na-emepụta na elu àgwà Texas ngwá 'preamp, n'ala ọnụ na gold plated RCA akara ndapụta nke na-enye anya a na-ekpo ọkụ, ezi ụda. Best akụkụ, Fluance ana achi achi ahịa maka ndụ support banyere ha ụdị. N'ihi $ 199,9, nlereanya a bụ a na-ezu ohi.
Elu mkpịsị eme ka a Pure analọg na-ege ntị ahụmahụ.
Ezigbo playback bụ ezigbo maka ogologo ige ntị sessions.
Ezubere maka oké njọ arụmọrụ.
Ọ nwere a nta ọsọ nke.
Turntable ngalaba tuner ngalaba CD Player ngalaba MP3 Bluetooth® ngalaba ampilifaya ngalaba Audio ntinye Audio ndapụta Ekweisi mmepụta Ọkà Okwu ngalaba Units N'ozuzu akụkụ arọ
Akwado Speed: 33-1 / 3, 45, 78 RPM
Chaị na Flutter: 0,25% (JIS WTD)
S / N ruru: 50dB ma ọ bụ karịa (IHF-A)
Katrij: Efere baraaka Type
Mkpịsị: STL-103 (safaya, maka LP / EP)
Tuner ụdị: PLL synthesized tuner
Number nke atọrọ atọ: 20 AM + 20 FM
Akwado Disc: CD-DA, CD-R, CD-RW
Akwado Formats: Audio CD, MP3, WMA
Nlele Frequency: 16k na 48kHz
Bit ọnụego: 8k ka 320kbps
WMA: DRM anaghị akwado
Nlele Frequency: 32k / 44.1k / 48kHz
Bit ọnụego: 48k na 192kbps
S / N ruru: 80dB ma ọ bụ karịa
Number nke kacha nchekwa: 255
Number nke kacha faịlụ: 999
Class: Class2 (max nso 10m / 33 ft.)
Akwado Profile: A2DP, AVRCP
Akwado Codec: Sbc X
Ọdịnaya Protection System: SCMS-T
Mmepụta Power: 25W + 25W
AUX1 (Front): 3.5mm (1/8 ") baraaka Mini Jack
AUX2 (N'azụ): RCA Pin Jjack
Njikọ: 3.5mm (1/8 ") baraaka Mini Jack
Type: N'azụ Bass-mpiaji Type
Ike ọkọnọ: AC120V, 60Hz (US / Canada) AC230V, 50Hz (UK / Europe)
Ike oriri: 25W
Main unit: 460 (W) × 215 (H) × 380 (D) mm18.1 "(W) x 8.5" (H) x 15,0 "(D)
Ọkà Okwu: 150 (W) × 250 (H) × 224 (D) mm, 5.9 "(W) x 9,9" (H) x 9,1 "(D)
Ọkà Okwu: 2.8kg
Ngwa: Remote Control (RC-1312), Batrị maka Remote (AA x 2), nkwụnye maka EP, Turntable Cover, mgbabere uzo x 2, Rubber ute maka Turntable usan edi, AM poolu, FM poolu USB, baraaka Mini nkwụnye USB, Ọkà Okwu Gịnị (3m / 10ft) x 2, nwe si Manual (akwụkwọ ikike Card)
Si Japan, TEAC ka ịbanye na turntable ụlọ ọrụ n'ezie ọma na ha ịtụnanya ngwaahịa. Ha na a na-eme turntables ihe karịrị afọ 60 ma ọ bụrụ na na dị na-egosi ha nka na mpaghara ebe a. Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe niile na-na-otu turntable, lee dịghị ihe ọzọ. Ọ bụ imewe bụ ịtụnanya dị otú ahụ na a sleek ochie anya.
Nlereanya a bụ a turntable stereo usoro na-abịa na CD, Bluetooth na radio ọrụ. Emekarị mgbe anyị na-anya n'ihi na turntables, anyị ga-hụ na o nwere niile atụmatụ gị mkpa. Lee ọ gara n'ihu dị ka ihe nlereanya a nwere niile atụmatụ ị chọrọ juru n'ọnụ n'ime otu. N'ihi na price nke $ 318, na-enye ohere njikọ ikuku si smartphones, mbadamba na laptọọpụ site Bluetooth. Ọ bụ otú ahụ adaba na ị ga-ada na ịhụnanya na nke a nlereanya mgbe na ya.
Banyere ya na-agba, nke a bụ a 3-ọsọ turntable na 33-1 / 3, 45 na 78 RPM na-enye ohere playback si LP / EP na SP ndia. Ọ bụ mmepụta ike bụ 25 X 25 Watts na gụnyere ke ngwugwu na-2-Way Bass mpiaji okwu. Nke ahụ bụ ihe ịtụnanya ndibiat n'ihi na ya price. Ọ na-nwere a tree loading CD Player na nke ahụ bụ dakọtara na CD-R / RW discs na MP3 / WMA faịlụ. Ná mmechi, ọ bụ a n'ezie ezi niile ahazi turntable.
Ọ nwere na Ochie 70 eche na oge a na tech uru.
The osisi bụ mara mma na oké nkume siri ike.
Ihe ndekọ ahụ na-arụ kwa ngwa ngwa.
07 • Pro-Ject - mpụta mbụ Carbon DC (Black)
Ụgbọala ụkpụrụ: belt mbanye
Usan edi: 300mm metal na obi ute
Mains agba: igwe anaghị agba nchara
Chaị & flutter: +/- 0,10%
Speed nwayọọ: +/- 0,80%
Signal ka mkpọtụ: -68dB
Irè ogwe aka ogologo: 218.5mm
Irè ogwe aka uka: 6.0g
Ndepụta ike: 10-30mN
Power njikọ: 110/120 ma ọ bụ 230/240 volt -50 ma ọ bụ 60 Hz
Gụnyere ngwa: 15volts DC / 0.8A ike esenyịn, ájá cover
Njikere ike oriri: <1 watt
Akụkụ: 415 x 118 x 320mm (WXHXD) mkpuchi emechi
Pro-Ject Audio Systems e hiwere na 1990 na Austria, Otú ọ dị ha n'ichepụta osisi na-na Czech Republic na Slovakia. Nke a ọkachamara turntable site Pro-Ject bụ ezigbo maka iche iche na ụdị njikọ dị ka multiroom usoro (SONOS, HEOS etc), TV, soundbars na obere ọdịyo.
Gịnị bụ ihe dị mma banyere ihe nlereanya a bụ na ọ dị mfe melite na nwere a belt mbanye na silicone belt na ala vibration moto. Na 8,6 "aluminum tonearm na sapphire biarin na tupu n'ịnyịnya Ortofon OM5e katrij, nlereanya a bụ a na klas n'elu ezie na o nwere a ubé nkpoda price nke $ 399. Ọ nwere wuru na-na phono tupu-ampilifaya na analogue na digital mmepụta. Gị mma, a ọlaedo RCA Diisk cable na-gụnyere nakwa.
E nwere a ụtọ larịị nke doo anya banyere olu nke a nlereanya. Ọ na-nwere a dị ọcha ụda na ghar acoustics. Banyere ya imewe, ọ bụ kpamkpam nwa na ọ dị oké mara. Ọ ga-aga nke ọma na gị ndụ ụlọ na ya imewe bụ fọrọ nke nta nke abụọ ọ bụla. Gịnị na-eme ihe nlereanya a na-eguzo si ọzọ bụ na ọ bụ pụrụ iche turntable ụkwụ maka irè decoupling. N'ozuzu, a nlereanya bụ kpọrọ tụlee.
The table onwe ya nwere a ịja mma anya.
Ọ nwere nnọọ na-anọpụ iche tonal itule.
Ọ dịghị akpaka n'ihi ogwe-aka.
All si UK, Rega bụ a ọma ike ika na-arụpụta phenomenal Turntables. Ọ bụ ya mere na ọ bụ nke ọ na anya na RP1 bụ dị ịtụnanya ngwaahịa. Ọnụ na $ 445 nke bụ ubé elu karịa turntables n'elu, ọ ga-notdisappoint ị dị ka ọ bụ ọkaibe.
Ọ nwere a ohuru Rega RB101 tonearm na bụ n'ezie mara mma. Ọzọkwa, o nwere a Rega Carbon-akpụ akpụ magnet katrij. Otú ọ dị ndị katrij nwere ike ịbụ otu nke kasị mma e nwere. N'ihi ya na-ekwu, ọ bụ ala vibration moto bụ nke elu àgwà na nwere nkenke isi amị na sub-usan edi mgbakọ. N'ihi na ndị magburu onwe ọsọ kwụsie ike, na o nwere ihe niile ọhụrụ Phenolic resinflywheel mmetụta n'efere dị mbadamba.
Ọ bụ imewe bụ ịtụnanya. Ọ na-ntekwasa na nwa na-acha ọcha, na-enye ya ezigbo mara futuristic anya. Ọ bụ otú ahụ n'oge a na-achọ ọ ga-ele anya dị ịtụnanya mgbe enịm ke ọ bụla n'akụkụ nke ụlọ gị. Na na ọ na-ejidesi ọcha ụda na ịtụnanya ụdịdị, ị ga-adịghị anya ọ bụla ọzọ maka a turntable. O doro anya na ọ bụ a na-ezu ohi for $ 445.
Elu àgwà ala vibration moto.
Mkpa ka mma katrij.
Product Akụkụ 13 x 17 x 4.5 sentimita
Arụpụtara na Czech Republic, Music Ụlọ Nzukọ bụ a ika na-e-eme turntables ruo afọ 50. Ahụmahụ dị mkpa na ọ bụ ya mere Music Ụlọ Nzukọ bụ otu n'ime ndị ọsụ ụzọ na ọrụ a.
Nke a bụ a 2-ọsọ turntable na dynamically ezi n'efere dị mbadamba nke dị oké mkpa maka inweta zuru okè ụda. Ọ bụ tonearm awade mgbanwe VTA maka kpọmkwem katrij itinye n'ọnọdụ. Ọzọkwa, ọ bụ dynamically ezi alloy n'efere dị mbadamba-agbaba na a elu kpọmkwem igwe anaghị agba ígwè na ọla amị mgbakọ. Ọ dị mfe ịgbakọta na ọ na-agụnye ihe ndị magburu onwe ntụziaka ntuziaka na a na 45 RPM nkwụnye.
Ọ bụ imewe bụ yiri RP1 ma nke a na-ntekwasa na-acha uhie uhie. Mfe bụ okwu na-akọwa na imewe nke ngwaahịa a. Na ihe ịrịba ụda na imewe, e nweghị ihe mere bụghị iji nweta ya. Maka $ 499, ị ga-enwe ike inwe aka gị na onye na taa.
Ụda bụ ịtụnanya ma mara.
Ọ bụ sleek imewe bụ mfe ma anya-akụta.
E nwere bụghị a akara ka ịgbanwee ọsọ.
10 • Na-Turn Audio - agba Plus Turntable (acha anụnụ anụnụ)
12.5 lbs, 5 x 17 x 13 ", 0,125% ha ha & flutter, -79 DBA S / N ruru, -63 DBA rumble
Mere na USA site U-Turn Audio, nke a bụ a elu-arụmọrụ turntable ọnụ na $ 309. O doro anya na nke a bụ ihe ịtụnanya turntable na-abịa na a nkenke tonearm na Ortofon OM 5E katrij, machined acrylic usan edi, a ntuziaka belt drive nke 33 na 45RPM.
Ọ bụ nnọọ mfe na-elu-na ojiji. Na ọ bụ ndụ oru nkwado, ị ga-ajụ ajụ onwe gị ihe ahụ abụghị na-amasị banyere nke a turntable. A ájá cover, RCA Gịnị, chere ute na otu afọ akwụkwọ ikike a gụnyere na nke a nlereanya. Gị mma, kemeghi counterweight na-gụnyere nakwa.
Chepụta maara ihe, ọ na-ntekwasa na-acha anụnụ anụnụ na nwere a ndumodu nke nwa na-silver. Ọ na-ese n'oge a ma classy. Na na ọ bụ ihe ịtụnanya ụda àgwà na oké ụda ogwe aka quality, nlereanya a ga-etinye n'ime anyị chebara ya echiche ma ọ bụrụ na ị na-achọ ịzụta a turntable.
Amazing ụda àgwà.
Great ụda ogwe aka mma.
Ọ bụghị akpaka.
Ọ dịghị tupu ampilifaya.